Maitiro ekuona zvinyorwa zvazvino muWindows 10 uye iyo yekutanga menyu | Gadget nhau
Zvazvino zvinyorwa muWindows 10
Kutsvaga chikamu che Zvazvino zvinyorwa muWindows 10? HKusvikira nguva pfupi yadarika ndanga ndisati ndamboona kuti chinhu che "Zvazvino Zvinyorwa" hachina kuoneka mune yangu yekutanga menyu, chokwadi ndechekuti shamwari yangu yakandibvunza kuti ndaiona sei magwaro achangovhurwa uye ndipo pandakapotsa chinhu ichi.
Sezvo ini ndaive ndaona chinhu ichi mumenyu yekutanga yeimwe shamwari, ndakafungidzira kuti ichave imwe sarudzo yekugadzirisa yandaizoremadza. Saka mushure mekutarisa nekukurumidza ini ndakawana sarudzo yakamisikidzwa uye ikozvino ndinokuudza maitirwo aungaita kuti chinhu "Razvino Gwaro" rioneke mune yako yekutanga menyu.
1 Dzazvino mafaera muWindows 10
2 Zvazvino zvinyorwa muWindows XP
Dzazvino mafaera muWindows 10
Kugona kuona mafaera achangoburwa kana zvinyorwa mukati Windows 10, zvakaringana kumisa basa rinotibvumidza kuti tizviite. Uye ndeyekuti Microsoft yanga isingade kukanganwa mune iyi vhezheni nyowani yesystem yakakurumbira yekushandisa iyi inonakidza uye pamusoro pechinhu chose chinobatsira.
Pakutanga vhura iyo Windows 10 menyu yekumisikidza, iyo iwe yaunogona kuwana kubva kuKutanga Menyu kana kuburikidza neWindows + i kiyi yekubatanidza. Kamwe ipapo, enda kune "Yemunhu" chikamu.
Zvino sarudza "Tanga" uye shandisa sarudzo "Ratidza zvinhu zvakavhurwa nguva pfupi yadarika". Kana ukasaishandisa, haugone kuona mafaera achangoburwa uye zvinyorwa zvawakavhura mukati Windows 10.
Kana tikaratidza Start Menyu uye sarudza chairo application, mune yedu Microsoft Excel, nekudzvanya kurudyi mbeva bhatani isu tinokwanisa kuona mafaera anga achangovhurwa.
Zvazvino zvinyorwa muWindows XP
Dzvanya pane yekutanga menyu uyezve nekweseri mbeva bhatani penya panzvimbo yemahara yebhuruu bar pazasi pemenu. Iwe unowana kahwindo kadiki kanoti "Properties". Tarisa pamufananidzo:
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, chinhu "Zvinyorwa Zvekare" hazviwonekwe mumenu.
Isa pointer pamusoro pehwindo rinoti "Properties" wobva wadzvanya kamwe. Iwindo rinotevera richaonekwa:
Dzvanya pane bhatani "Gadzirisa" uye muhwindo rinovhura sarudza iyo "Yepamberi sarudzo".
Iye zvino unofanirwa kutarisa bhokisi "Ratidza magwaro achangobva kuvhurwa" wobva wadzvanya pa "OK", hwindo richavhara. Sezvo "Taskbar uye Start Menyu Properties" hwindo richaramba rakavhurwa, tinya "Nyorera" uyezve "OK" kuti uvhare iyo.
Iye zvino unogona kuona zvinyorwa zvako zvenguva pfupi kubva kuKutanga menyu:
PChekupedzisira, yeuka kuti kana nechimwe chikonzero iwe usiri kuda kuti mumwe munhu aone magwaro awachangobva kuvhura, unogona kudzima runyorwa. Kuti uite izvi, dzokorora nhanho 1 kusvika ku3 uye kamwe chete mu "Yepamberi sarudzo" tab yeiyo "Gadzira iyo yekutanga menyu" hwindo, iwe unofanirwa kungobaya pane "Delete list" bhatani.
RRangarira kuti izvi hazvizodzime magwaro awakashandisa nguva pfupi yadarika, zvinongodzima iwo kubva ku "Razvino Zvinyorwa" runyorwa uye kana iwe ukaashandisa iwo zvakare anozoonekwa mune ino chinyorwa zvakare.
ENdinovimba wawana iyi dzidziso inobatsira kuona iyo Windows 10 Mafaira Ekupedzisira uye XP. Kwaziso yemunda wemizambiringa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Zvazvino zvinyorwa muWindows 10
Mhoro Alejandro, mumazuva mashoma ndichaedza kugadzirisa kusahadzika kwako pamusoro peaimp, tichaona kuti yakanyorwa sei uye maitiro ekumisikidza odhiyo.
Kutenda nekupindura, zvinoongwa. Kwaziso.
Mhoro vhiniga, nhasi ndasangana nepeji rako ndichitsvaga internet uye zvaitaridzika kunge zvinonakidza zvirinani pane izvo zvishoma zvandakaona, ndinofunga matipi ako ese achandibatsira kwazvo, ini ndatoita matanho ekuti ndive nechinhu chazvino zvinyorwa uye zvinoita sekunge zvinobatsira kwandiri, ndinodawo kukuudza kuti ndakuwana nekuti ndanga ndichitsvaga ruzivo nezve mabatirwo eiamp classic player ini ndatoona izvo zvaunotsanangudza zvekumisikidza uye zvakanaka kwazvo, izvo ini ndingade kuti undibatsire kundidzidzisa kubata sarudzo yerekodhi cd uye kuti vhoriyamu yunifomu munziyo dzese sezvo idzi ndakadzinyora kubva kwakasiyana siyana uye ndine mavhoriyamu akasiyana, kuitira kuti uzvinzwe mune ino mutambi hapana kana dambudziko nekuti sekutaura kwako kuti vhoriyamu inongoenzanisirwa kutamba asi kumutero ndinoita sei? Ndichaonga rutsigiro rwako, ndokuona munguva pfupi
Kutenda nekuba kwandanga ndisingazive iwe unogona kuona zvinyorwa zvangu zvenguva pfupi yadarika. Iva kana iwe uchiramba uchiisa mawadhi eWindows zvakanyatsotsanangurwa. Kwaziso kubva kuCaracas.
Mhoro Maroon, ndinofara kuti hunyengeri hwaive hunobatsira iwe. Ini ndicharamba ndichiisa mamwe manomano, nekuti kunyangwe dzimwe nguva dzichiita senge dziri nyore, havazi vese vanovaziva uye ikozvino iwe, semuenzaniso, iwe unotoziva zvekuita kuratidza magwaro achangoburwa, handiti? Verenga Vinagre Asesino kune yako IT kusahadzika. Kwaziso.
chula musikana akadaro
Mhoro wakanaka ... ndatenda nezano rako. kare mukomana wangu akavhara akadzidza, achangopfuura aine pfungwa yekuti haazoone zvaaiita husiku ... ndinokutendai ini ndatoziva ... kutsvoda nekutenda.
Pindura kuna nenita chula
Oops ndafunga kuti wafanirwa kuisa chimwe chinhu kuti uone magwaro achangobva kuitika. Zvirinani nenzira iyi, ndatenda.
Hola chula musikana unoona kuti kune vanhu vasingade kuratidza zviri mumagwaro achangoburwa. Nei zvichidaro? Zvakanaka ikozvino watoziva kuvaona sei uye haazive kuti unovaona
Hola Pedro hapana chekuisa kuti utarise magwaro awachangobva kuvhura. Wakaona here kuti zviri nyore sei? Kwazisai vese.
Ndine XP Colossus yakaiswa, uye chokwadi ndechekuti inoshanda chaizvo kunze kwezvinhu zvishoma senge semuenzaniso izvo zvandisingakwanise kuratidza mafaira achangoburwa, kunyangwe iyo sarudzo yekuigonesa kubva kubhatani rangu rekutanga sezvatsanangurwa pamusoro. Zviripachena kuti yakashandurwa kubva murejista faira.Mubvunzo wangu, unoziva here kugonesa iyi sarudzo?
Kubva ndatotenda zvikuru.
Mhoro vhiniga: kubhurawuza ini ndawana peji rako nekuti ini ndoda kudzidza hunyanzvi hwemakomputa uye zvairatidzika kunge zvakanyatsotsanangurwa kwandiri, iwe wakanaka semudzidzisi nekuti unotsanangura mune yakapusa uye yakajeka nhanho nhanho. Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwenyu.
Unogamuchirwa Mauricio, ndinovimba unoramba uchishanyira iyo blog uye kuti unofarira zvinyorwa zvako. Kwaziso.
Mhoroi, izvi zvinonakidza pamusoro pemafaira achangoburwa asi ndine DAMBUDZIKO ... pane yangu pc ine win xp sp2 ini ndinongowana ekupedzisira matatu mafaera ekupedzisira, nepo pahofisi pc pane gumi anowanzo mafaera uye anoshanda zvakanyanya saka shamwari ehe Unogona kundiudza maitiro andinoita kuti iwo gumi kana mamwe mafaera achangoburwa aoneke paPC yangu nekutenda email. chisarai
ChiGerman ndiyo nguva yokutanga pandakaverenga dambudziko rakafanana nerako. Izvo zvisingawanzoitika, kazhinji ivo vanogona kunge vachioneka kana kusaoneka, asi chete mamwe magwaro haaonekwe. Ini ndichaona kana ndikawana chero ruzivo. Kwaziso.
Mhoro vhiniga ndine dambudziko nemagwaro achangoburwa uye nderekuti pandinoteedzera rairo dzako muchikamu chezasi chesarudzo kuti ufambire mberi, sarudzo yekumisa kana kudzima magwaro achangoburwa haioneke kuti ndakunda xp
Pindura kune roanfo
roanfo inoitika kune vamwe vazhinji uye kazhinji inokonzerwa nehutachiona. Mhinduro yacho haisi nyore uyezve handikwanise kuvimba nefaira inoigadzirisa saka handigone kuibatanidza. Ndine urombo kana ndikawana chinhu chakachengeteka chiziviso.
mhoro, ini ndoda rubatsiro kubvisa admin mushandisi, chii chandingaite?
Ndiri kufara kusangana nevanhu vakaita semi. Ndine dambudziko rekutadza kumisikidza magwaro achangoburwa, ndakatozviita nhanho nhanho asi hwindo hariratidzike kwandiri pamwe nekuwe Sarudzo dzePamberi, chikwangwani pazasi hachiratidzike chinoti «Sarudza sarudzo iyi… . uye zvakare bhokisi diki rine «Ratidza ……» rakaitwa, iro rese bhokisi rinoratidzika risina chinhu .. ndibatsireiwo ndapota, ndoitei?
Pindura kuna LETY
LETA dambudziko rako nderekuti hutachiona hwachinja iro registry reWindows. Unofanirwa kuchinjazve uye hazvisi nyore. Pamwe ita dzidziso.
Ndine dambudziko rekutadza kumisikidza magwaro achangoburwa, ndakatozviita nhanho nhanho asi hwindo hariratidzike kwandiri pamwe newe kwauri zveAdvanced options, chiratidzo pazasi hachiratidzike chinoti "Sarudza iyi sarudzo ... . uye zvakare bhokisi diki uko "Ratidza ......" rakaitwa, iro rese bhokisi rinoratidzika risina chinhu .. ndibatsireiwo ndapota, ndoitei?
ita chinomhanya kwazvo icho dzidziso kuti ndione kana ndichigadzirisa iro dambudziko
Ini handioni sarudzo yekugonesa magwaro achangoburwa. Ini ndakatevera maitiro sekuratidzwa asi sarudzo haioneke
a hug luis
Pindura kune yakaroe
Fatima sanchez akadaro
Mhoroi, dzidziso yacho ndizvo zvandaitsvaga, asi sarudzo yekumisikidza magwaro achangoburwa haioneke. Ona kana uine ruzivo rwakawanda rwenyaya uye tipe ruoko rudiki.
Pindura Fatima Sanchez
Mhoroi, ini ndatevera mirairo nhanho nhanho. ratidza kuti uone magwaro achangoburwa, asi pakombuta yangu sarudzo iyo yaunoratidza: "Ratidza magwaro achangovhurwa" haioneke. Pane imwe nzira yekuzviita ???
Mike @ itcs akadaro
Mhoro zvakanaka !! Zvakanakisa zvese Vhiniga. Ini ndinokuudza kuti ndine dambudziko nerondedzero yemafaira apfuura, Iyo inoshanda sisitimu yeWindows Vista Bhizinesi. Izvo zvinoitika zvinotevera: hazvigadzirise runyorwa! Kana ndangodzima rondedzero, "yakazadzwa" zvakare uye kubva ipapo haina kunyora magwaro ekupedzisira akavhurwa.
Ndinovimba ndatsanangura zvakanaka uye iwe unonzwisisa zvandiri kuedza kutaura. Nenzira imwecheteyo, ndinokutendai zvikuru. Mwedzi iwe wakabatsira zvakanyanya pane dzinoverengeka nguva
Pindura kuna Mike @ itcs
Elementary asi zvakafanira. Ndatenda.
Mhoroi, iwo madhiri avakasiya anoita kunge anotonhorera kwandiri.
Pano ndine dambudziko rekuti vaone kana vachibatsirana neni ndine acer 4720z laptop uye madhiraivho eruzha haandiisi ini ndakadzora madhiraivha akati wandei uye hapana kana chekuona kana vachindibatsira neichi chokwadi chandakadya ini yakasiya dambudziko diki rombo
Chinhu chega chandisinganzwisise ndechekuti sarudzo iyi haioneke mumenyu yangu, unoziva chero nzira yekumaka Windows kuti igoonekwa zvakare?
Pindura kuna windosito
Mhoroi ndaona zvaunotsanangura nezve "Zvazvino Zvinyorwa" mune yangu ini ndanga ndatova nazvo semazuva ese, nyaya ndeyekuti mune yangu nyaya yakabviswa uye sarudzo muzvivakwa haioneke, ndingawana sei iyo "Recent Zvinyorwa" of unouya wekutanga menyu zvakare? maita zvakanaka chaizvo zvenyu.
Pindura kuna cesarlalp
Iwe, Wako akadaro
chakanakisa mupiro ,,, handizive kuti yanga yakapfeka kwenguva yakareba sei asi yakanaka,
Mhoroi, zvese zvinotonhorera uye zvakapusa, asi dambudziko randinaro nderekuti sarudzo yemagwaro achangoburwa haioneke, iyo nzvimbo haina chinhu, yemahara. Zvandinogona kuita?
Ini ndiri mumamiriro akafanana naFeliksi na tutus. Iyi sarudzo inoratidzika isina chinhu. Ndinovimba uye iwe unogona kutibatsira.
Uye ini ndaigona kuzviita. kana uchifarira ndizivise. Chikwata changu iXp.
NDINE WINDOWSES XP ISINA MAI MAZUVA ANO FILES CHIKAMU CHINOBATA. NDINGAITE SEI KUTI IITE?
Jorge Luis m akadaro
Kutenda nerubatsiro rwekugona kudzima ruzivo pane yangu pc
Pindura kuna jorge luis m
Mhoroi, dambudziko rangu nderekuti handisi kuona dhairekitori = Zvazvino Zvinyorwa muC: Zvinyorwa uye Zvirongwa Zvese Vashandisi uye hazvina kuvanzwa, chii chandingaite? Zvinoita sekunge dhairekitori rakabviswa asi pakutanga kana magwaro achangoburwa aripo asi kwete pane diski C, ndokumbirawo mundibatsire, pamberi pekuvonga, kwaziso
Pindura kune javilin
Mhoro! ndatenda nepeji rako Ini ndatevera rairo dzaunopa uye pakupedzisira ndinoona magwaro apfuura.
Mhoro mushe mubvunzo hauuyi padanho rechitatu re "Ratidza magwaro achangovhurwa" handiwane kuti ndione nekuti ??? Ndakamirira mhinduro yako ndatenda.
asi ini ndakaisa email yangu zvisirizvo
Mhoroi, ndiri kutsvaga rairo yekumhanya, mune notepad kana kushandisa rairo kuvhura zvakananga iro razvino zvinyorwa zvinyorwa, unogona? Ndatenda.
yeiyo ichangoburwa zvinyorwa sarudzo yekuoneka Ndakaita izvo iwe zvauri kuratidza asi mune yepamberi sarudzo sarudzo zvine chekuita nemagwaro achangoburwa hazvioneke
PETER M. akadaro
Mhoro vhiniga, peji rako randangosvika kuziva rinodzidzisa kwazvo, zvinosuwisa kuti chinyorwa hachina kundibatsira nekuti sarudzo "RECENT DOCUMENTS" haioneke paPC yangu mune yakasarudzika midziyo hwindo. Kutenda kubva kumamodhi ese uye makorokoto
Pindura PEDRO M
Carlos tsanangudzo yezita rekutanga akadaro
MHORO PANGUVA YANGU PANDINOPA ZVAKAWANDA ZVISARUDZO NDINOSANZIRA KUSARUDZWA KUTI NDINONYANZE KUTI NDIRATIDZE MAZUVA ANO
Pindura CARLOS O
Melano anogara akadaro
Ndatenda kwazvo shamwari, ini ndaifanira kuziva izvi kuti ndigone kumushandisa akandibvunza.
nerudo Afinca Melano
Pindura Afinca Melano
ISHE VINEGAR KILLER
Ndine epson lq 1070+ esc / p2 purinda uye haina kupurinda nechero inoshanda system. Paunenge uchiita bvunzo yemanyowani inodhinda nenzira kwayo.
Ndinoonga kubatana kwako
leydi paola akadaro
ndinotenda nekuda kweiyo huru trukitoo jijijijiji
Pindura kuna leydi paola
Zvekuita kana zvikaoneka "Ratidza magwaro achangovhurwa" aunoratidza padanho # 3? Ndakaedza kuzviita ndichishandisa gpedit.msc asi handisi kuona chero mafaera akamboshandiswa ...
Ndatenda nekuisa. Ini ndanga ndichitsvaga iyi ruzivo kwenguva yakareba.
Pindura mid midueuez
ROBERT CASTLE akadaro
Kubva pachinyorwa chino, zvingave zvakakodzera kucherechedza kwatinogona kuwana chaiko nzvimbo yeiyo ine folda, nekuti haisi kugara uchigara kwaunotiudza, kana neimwe nzira ini handina iyo. Zvaigara zviri nyore kwandiri kuti ndiwane dhairekodhi iri, asi ikozvino zvandinomomhanyisa muchina, handichauwani. Ndinovimba unokwanisa kundiudza zvandaigona kuita kuti zvioneke mune yangu dhairekitori remidzi, sezvo dhairekitori remushandisi risimo kana.
Kwaziso nekutenda pamberi.
Pindura ROBERTO CASTILLO
Mhoroi, zvinoitika kuti ndaive neCD yemifananidzo yemazororo angu, uye ndaida rombo rakaipa kuti ranyangarika, asi iwo mafoto aive mune rejista, ndokuti mu HOME -> MAGWARO, pane ese mafoto, kana zvakanyanya, uye ndinofunga ndinogona kuzvidzorera, pandinodzvanya pane imwe yeaya mafoto zvinondikumbira kuti ndiise diski mudhiraivha E (ndokuti, kuisa cd rangu rakarasika), asi mubvunzo wangu ndewokuti, ndiri kuona mifananidzo iyo vari mu START -> MAGWARO pasina kuisa iyo cd iyo yandiri pachena kupotsa ??, ndatenda
Waoooooooooooooooooooooo !! Ini handizive kuti nei ndichinzwa kunetseka sezvo Daviid asiri pano! Zvinhu zvachinja ..
Zvakanaka. Kunhuwirira kwako Vhiniga. Asi, ini ndinofunga idiki diki kuti iwe utsanangure chimwe chinhu chakanyanya zvekuti mwana wemakore mashanu anogona kuzviita nekuverenga nekutsvaga zvishoma.
Vamwe vanobva vashamisika kuti chii chauri kuita pano "magilipoyas" kana chiri chepuraimari hahaha ps hongu chiri chepuraimari uye ini ndinoenda kuwebhu ndichitsvaga maforamu kana mawebhusaiti kuti ndisiye zvangu nezve zvandinofunga.
Chero ani zvake asingade kuisvira ..., ^
Victor ini handisi nyanzvi panyaya iyi. asi ini ndinofunga kuti mune yako hongu, warasa cd uye pc yako haichengete kopi yemafaira haugone kuona iyo mapikicha = '(..
hesi maita basa kwazvo nehunyengeri uhu hwaive hwakanakisa, nekuti hama yangu yaida kundiuraya ...
hot dog akadaro
Mhoro Vhiniga, nhasi ndaona saiti yako uye ndanga ndichida kukubvunza uye ndirikukuudza kuti sarudzo iyoyo hairatidzike kwandiri, it is more after the first options chete grey bar rinowoneka sezvo vhezheni yangu yeXP isina doc. ichangopfuura
Iwe unofanirwa kugadzirisa windows registry, yeichi isu tinovhura iyo regedit (kubva kune yekutanga menyu, mhanya, regegit)
Ngatiendei kune inotevera kiyi mune windows registry:
Gadziridza Mukunyoresa kwe XP Coloss
Ikoko isu tichaenda kugadzirisa maparamendi emakiyi nenzira iyi:
'NoRecentDocsHistory' —–> izvi mu «1» tinozvichinja kuita «0»
'NoRecentDocsMenu' ——-> iri mu «1» tinoichinjira ku «0»
Isu tinotangazve iyo pc, uye izvo zvapfuura zvinyorwa zvinyorwa zvinowoneka zvakare mumenyu yekutanga 😀
kugona kwako dzidziso yakandibatsira zvikuru ndatenda
ndatenda nerubatsiro nenyaya yemapepa achangoburwa mumenu yekutanga.
Pamusoroi, kuda kwangu ndekwekuti kana paine nzira yekumisikidza magwaro achangoburwa kuitira kuti vangochengetedza "docs.de izwi" uye kwete vamwe vakaita semimhanzi nemavhidhiyo..etc. Kutenda mberi.
Pindura kuna DJ
Ndatenda kwazvo nedudziro vhiniga ine magirafu uye zvinoratidza zviri nyore ok
Zvakanaka kuvonga zvakanyanya neruzivo, asi ini ndinoedza kuita iwo matanho uye sarudzo yekugonesa magwaro achangoburwa haaratidzike. Pandinoita izvo zvataurwa pamusoro, ndinosvika ku Advanced Sarudzo tebhu, uye ini ndinongowana sarudzo kana bhokisi re "Recent Startup Items" uye kwete chikamu chepasi. Ndatenda..!!!
Chii chiri kumusoro, hunyengeri uhwu hwakanaka, asi um, ini handioni sarudzo iyoyo yekuisa zvinyorwa zvazvino, ndingaite sei?
Pindura kune haqker!
Mhoro VINAGRE NDINE DAMBUDZIKO RAKAFANANA, ASI MUFANANIDZO NDEKUTI HANDINA KUSARUDZA KUTI NDIRATIDZE MAGWARO ACHAPEDZURWA PASI PASI… NDAKABATSIRA MATANHO OSE AUNOTAURA ASI PANDAKASVIRA ZVISARUDZO ZVISINGAONEKERI KWANGU NDINOTAURA 'NDINOZIVA…. NDIBATSIREI NDISINGAFUNGIRE
Pindura kuna YOESLIN
Mhoroi ndine dambudziko rakafanana neyeslin, iyo sarudzo haioneke. kana uchikwanisa kundipa imwe sarudzo ndinokutenda zvikuru
Avo vasingaone sarudzo ye 'zvinyorwa zvenguva pfupi'
kazhinji vakasarudza iyo yechipiri sarudzo yeiyo Start Menyu, ndokuti, 'Classic Start Menyu'. Kana ivo vakaichinjisa kune yekutanga sarudzo sezvakaratidzwa muhwindo rechipiri remini dzidziso, ipapo ivo vanofanirwa kuteedzera rairo.
Mushure meizvozvo, vanogona kudzokera kumenu yavakange vajaira.
Maria Elena Zidar akadaro
Tsananguro huru !!! Ndazviita 🙂 ndatenda
Pindura María Elena Zidar
Mhoroi apo; Chaizvoizvo Kutenda !! Yakandibatsira nhasi, ndakanga ndisingazive maitiro ekuwana magwaro angu achangoburwa.
Pindura kuna Yajaira
Paola Munoz akadaro
Imwe nzira yekuona zvinyorwa zvenguva pfupi ndeyekutevera inotevera Path
C: Zvinyorwa uye Zvirongwa uye zita rako rekushandisa, kana dhairekita iri risingaoneke unoenda kuFolder Control Panel Verify tab unogona kuratidza mafaera ese akavanzika uye maforodha - >>> unobvuma uye ndizvozvo
Pindura Paola Munoz
Tesla ichavhura chitoro chayo chekutanga muSpain muBarcelona
Iine iyo Razer Basilisk mbeva iwe unonakidzwa neFPS senge diki yekutenda kune kwayo inokonzeresa